WARBIXIN :Dowlda dalka rushka oo kutilmaamatay cunaqabateynada cusub ee uu marenkanka saaray kuwa aan la aqbali karin . – The Voice of Northeastern Kenya
Posted in Faallo, WARARKA
WARBIXIN :Dowlda dalka rushka oo kutilmaamatay cunaqabateynada cusub ee uu marenkanka saaray kuwa aan la aqbali karin .
Star FM August 9, 2018
Aqalka Kremlin-ka dalkaasi Rushka ayaa maalintii khamistii kudhawaaqay in cunaqabateynada uu mareykanka saaray dalka rushka ay yihiin kuwa aan la aqbali Karin, cunaqabateynadan ayaa xukuumada rushka lasaaray kadib markii lagu edeeyay weerarar loo adeegsaday sunta neerfaha waxyeeleysa oo ladoonayay in lagu khaarijiyo nin horay basaas u ahaa taaso lacagta iyo dhaqaallaha dalka rushka si aad ah usaameysay .
Talaabadan uu mareykank qaaday ayaa waxaa ay kusoobeegmeysaa xili bil kahor uu madaxweynaha mareykanka donald trump oo madaxweynaha dalka rushka valadamiir putin ay kukulmeen magaalada Helsinki.
Xukuumada Washington ayaa maalintii arbacada sheegtay in cunaqabateynadan cusub ay yihiin kuwa looga fal cilinayo talabadii uu rushka kuisticmaalay sunta lagu magacaabo ‘Novichok’ oo neervaha wax yeeleysa taaso lagu doonayay in lagu khaarijiyo muwaadin udhasahay dalka UK oo lagu magacaabo Sergei Skripal” kaaso ahaa laba wakiil basaasna ahaa iyo gabar udhalay oo iyadauna lagu magacaabo Yulia gudaha dalka UK bishii marso ee aynu soo dhaafanay.
Mareykanka ayaa sidokale sheegay in cunaqabateynadan looga gol leeyahay in lagu ciqaabo dowlada putin waayo waxay adeegsatay xukaamadiisa ” hubka kiimikada ama baayoolojiga ah. Waxayna kuxad gudbeen sharciga caalamiga ah.
Madaxweynaha dalka mareykanka Donald Trump oo lakulamay madaxweynaha dalka rushka valadamiir putin bishii july ee aynu soo dhaafnay ayuu sheegay in xukumada Moscow ay rajeyneyso in xiriir wanaagsan ay layeelato dalka mareykanka .
Cunaqabateynadan ayaa waxaa ay sabababeen in lacagta dalka rusha ee ruble-ka looyaaqaano ay 66.48 ay hoos udhacday marka loo barbardhigo lacagta dollar mareykanka taaso kadhigeyso hoos udhacee ugu weynaa ee kudhaca lacagta dalka rushka tani bishii novembar ee sanadii 2016-ka . dhanka kale suuqyada saamiga dalka rushka ayay cunaqabateyntan aad saameysay.
Talabadan ayaa waxaa ay sidokale meesha kasaareysa alaabo malaayin dollar kukacayo oo uu rushka dhoofin jiray.
Bangiyada rushka ayay sidokle cunaqabateyntan saameysay, . dhaqaalaha dalka rushka ayaa horanba laliilicayaya cunaqabateyno lasaaray sanadii 2014-kii taaso laxiriirta faragilintii uu rushka kulahaa xukamada Ukraine .
Xirirka diblomaasiyadeed ee dalka rushka iyo mareykanaka ayaa ahaa mid aan aad u wanaagsaneyn sanadihii ugudambeeyaya, Bishii march ayay aheyd markii ay xukuumada washinton ay dalkeeda kasoo ceyrisay 60 diblomaasiyiin oo rushian ah .
Iyaadoo taa kafal celinayo dowlda rushka ayaa iyaduna dhankeeda soo ceyrisay 60 diblomaasiyiin kasoojeedo dalka mareykanaka.
WAXAA QORAY JAMAL AHMED ABDURAHMAN (JAMALUDIN)
:XIGASHO WAKALADA WARARKA EE AFP
← DHAGEYSO :Gudoomiyaha Dhuusamareeb Macalin Nuur Cilmi oo ka hadlay hawl galkii bacaha madoow ee baabuurta lagu dhejiyo.
Qoys diyaarada laga reebay kadib markii uu cunugooda kudhex ooyay diyaarada. →
DHAGAYSO:Warka habeenimo November 20, 2018
DHAGEYSO:Barnaamijka Hoggaanka star,Qoyska iyo waalidnimada 20-11-2018 November 20, 2018
Wasaarada maaliyada Soomaaliya oo ka jawaabtay eedaymo loo soo jeediyay. November 20, 2018
AMISOM oo sheegtay inay AL-shabab ka saarayaan gobolada Jubooyinka. November 20, 2018
Xildhibaan ka badbaaday qarax gaarigiisa lagu xiray. November 20, 2018
DHAGEYSO:warka Duhurnimo ee idaacada star FM 1:30 PM November 20, 2018
Maalinka carruurta adduunka oo loo dabaaldegayo November 20, 2018
Sacuudi Carabiya iyo imaraadka oo Yemen u ballanqaaday 500 milyan oo doolar oo gargaar ah November 20, 2018
IIraan oo ku hanjabtay inay isaga baxeyso heshiiskii Nukliyeerka November 20, 2018
Xildhibaanka Kimilili oo ka soo horjeestay sharciga sinnaanta Jinsiyadda November 20, 2018
DHAGEYSO:Barnaamijka Hoggaanka star,Qoyska iyo waalidnimada 20-11-2018
Wasaarada maaliyada Soomaaliya oo ka jawaabtay eedaymo loo soo jeediyay.
AMISOM oo sheegtay inay AL-shabab ka saarayaan gobolada Jubooyinka.
Xildhibaan ka badbaaday qarax gaarigiisa lagu xiray.
DHAGEYSO:warka Duhurnimo ee idaacada star FM 1:30 PM
Maalinka carruurta adduunka oo loo dabaaldegayo
Sacuudi Carabiya iyo imaraadka oo Yemen u ballanqaaday 500 milyan oo doolar oo gargaar ah
IIraan oo ku hanjabtay inay isaga baxeyso heshiiskii Nukliyeerka
Xildhibaanka Kimilili oo ka soo horjeestay sharciga sinnaanta Jinsiyadda